किन बढ्दैछ युवापुस्तामा मानसिक समस्या ? – Health Post Nepal
२०७५ भदौ १६ गते ९:२१
काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालको तथ्यांकले युवा मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ । महारागन्जस्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा दैनिक २० देखि २५ को संख्यामा मानसिक रोगी आउने गर्छन् । त्यसमध्ये युवाको संख्या १० देखि १५ भएको अस्पतालको मानसिक विभागको तथ्यांक छ ।
बेरोजगारी, युद्ध, घरायसी तनावलगायत कारणे युवा पुस्तामा मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज वझा बताउँछन् । यसका अतिरिक्त जाँडरक्सी तथा चुरोटखैनीलगायतको सेवनले समेत मानसिक रोगीहरूको संख्या बढेको डा. वझाको भनाई छ ।
मानसिक रोगीलाई कडा मानसिक रोगी र नरम मानसिक रोगी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । वर्तमान समयमा कडाखालका मानसिक रोगीको संख्या अत्यधिक देखिएको मानसिक अस्पताल पाटनका निर्देशक डा.मोहनराज श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार मानसिक रोगको उपचारका लागि २०–३० वर्ष उमेर समूहका युवा बढी आउने गरेका छन् । मानसिक रोगअन्तर्गत डिप्रेसनको समस्या भने पुरुषभन्दा महिलामा बढी देखिएको छ । जीवनमा अभाव बढी हुनु, कुलत, बेरोजगारी, देखासिकी, निद्रा नलाग्नुलगायत कारणले मानिसहरू युवावस्थामै मानसिक रोगले ग्रस्त हुन पुग्ने डा.श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी युवा मानसिक रोगी देखिएका छन् ।
युवाहरूमा पनि कडा प्रकारका मानसिक रोगीमा उपचार गर्नुपर्छ भने धारणा नै हुँदैन । उनीहरू आफूलाई रोग लागेको स्वीकार गर्नै मान्दैनन् । प्रेम सम्बन्ध आकस्मिक रूपमा छुट्नु, परिवारका कुनै निकट सदस्यको मृत्युलगायत कारणले समेत कतिपय युवा मानसिक रोगी बन्न पुगेका हुन्छन् । नेपालमा मानसिक रोगीहरूमा विशेषगरी चार प्रकारका उदासीनता, विक्षिप्तता हिस्टोरिया र छारेरोगजस्ता समस्याहरू देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू घरपरिवारबाट टाढा रहनुले पनि मानसिक समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछन् । यसका साथै बढी मात्रामा अल्कोहलयुक्त पदार्थको सेवनले समेत युवामा मानसिक रोग देखिएको डाक्टर वझा बताउँछन् ।
कतिपयलाई वंशानुगत कारणले नै मानसिक रोग लाग्छ । त्यस्ता मानसिक रोगीको उपचार सम्भव नरहेको डा.श्रेष्ठ बताउँछन् । गत साउन महिनामा मात्रै मानसिक रोगको परीक्षणका लागि पाटन मानसिक अस्पतालमा ३ हजार ७ सय ६५ बिरामी आएको डा.श्रेष्ठ बताउँछन् । जसमध्ये १ हजार ८ सय १३ महिला तथा १ हजार ९ सय ५२ पुरुष थिए ।परिवारको पालनपोषण तथा आर्थिक बोझका कारण पनि युवापुस्तामा मानसिक रोग बढ्दै गएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ वझा बताउँछन् ।
वर्तमानमा मानसिक रोग विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ । विश्वमा करिब २० देखि २५ प्रतिशत मानिसमा मानसिक समस्या देखिएको डाक्टर वझा बताउँछन् । चेतना तथा सेवा–सुविधाको स्तर बढ्दै गएको वर्तमान समयमा उपचारका लागि आउने मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गए पनि मानसिक रोगीको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको डाक्टर वझाको दाबी छ ।
उनका अनुसार युवापुस्तामा मानसिक रोग बढ्नुको कारण राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको बेरोजगारी र आर्थिक अभाव पनि एक हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू घरपरिवारबाट टाढा रहनुले पनि मानसिक समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछन् । यसका साथै बढी मात्रामा अल्कोहलयुक्त पदार्थको सेवनले समेत युवामा मानसिक रोग देखिएको डाक्टर वझा बताउँछन् ।